Soomaalida Borlänge oo duurka lagu jarayo | Somaliska
Ku dhawaad 20 Soomaali ah oo ku nool magaalada Borlänge ee gobolka Dalarna ayaa fursad u helay in ay ka shaqeeyaan duurka Dalarna ayagoo u shaqeyn doona Laanta Qaabilsan Duurka. Soomaalidaan ayaa la siiyay tababar la xiriira amaankooda iyo sidii ay u isticmaali lahaayeen qalabka kala duwan ee loo baahanyahay. Dadkaan shaqakada ka helay Borlänge ayaa waxaa u badan rag ayadoo ay ku jirto haweeney Soomaaliyeed. Khadijo Salaad oo ka tirsan dadka ka shaqeyn doona duurka ayaa ku tilmaantay in ay noqon doonto mid xiiso leh. "Dad badan ayaa Soomaalida ka aaminsan in aan jecelnahay in aan iska fadhino oo ceyr qaadano, mashruucaan waxa uu fursad noo siinayaa in aan badalno sawirkaas qaldan" ayuu Maxamud Xirsi oo ka tirsan dadka shaqada helay u sheegay Wargeyska Dala-Demokraten. Waqtiga xagaaga ayaa ah waqti ay dad badani ka faaideystaan shaqooyinka ka banaan duurka iyo jarida cowska ayadoo aan shaqadaan la qaban xiliga qaboobaha. "Waa in aad isticmaashaan qalabka amaanka, xitaa haddii ay aad u kulushahay cimilada" ayuu yiri Kent Persson oo tababarka amaanka bixinayay. Mashruucaan ayaa waxaa ka shaqeyn doona 50 qof ayadoo ay soo dalbadeen 100 qof, ka dib wareysi ayaa la doortay 50 ay 20 tahay soo galooti. 19 Soomaali ah iyo 1 Ciraaqi ah. Dala-Demokraten
Ku dhawaad 20 Soomaali ah oo ku nool magaalada Borlänge ee gobolka Dalarna ayaa fursad u helay in ay ka shaqeeyaan duurka Dalarna ayagoo u shaqeyn doona Laanta Qaabilsan Duurka. Soomaalidaan ayaa la siiyay tababar la xiriira amaankooda iyo sidii ay u isticmaali lahaayeen qalabka kala duwan ee loo baahanyahay.
Dadkaan shaqakada ka helay Borlänge ayaa waxaa u badan rag ayadoo ay ku jirto haweeney Soomaaliyeed. Khadijo Salaad oo ka tirsan dadka ka shaqeyn doona duurka ayaa ku tilmaantay in ay noqon doonto mid xiiso leh.
“Dad badan ayaa Soomaalida ka aaminsan in aan jecelnahay in aan iska fadhino oo ceyr qaadano, mashruucaan waxa uu fursad noo siinayaa in aan badalno sawirkaas qaldan” ayuu Maxamud Xirsi oo ka tirsan dadka shaqada helay u sheegay Wargeyska Dala-Demokraten.
Waqtiga xagaaga ayaa ah waqti ay dad badani ka faaideystaan shaqooyinka ka banaan duurka iyo jarida cowska ayadoo aan shaqadaan la qaban xiliga qaboobaha.
“Waa in aad isticmaashaan qalabka amaanka, xitaa haddii ay aad u kulushahay cimilada” ayuu yiri Kent Persson oo tababarka amaanka bixinayay.
Mashruucaan ayaa waxaa ka shaqeyn doona 50 qof ayadoo ay soo dalbadeen 100 qof, ka dib wareysi ayaa la doortay 50 ay 20 tahay soo galooti. 19 Soomaali ah iyo 1 Ciraaqi ah.
Walaalka qoraalka soo qoray aad ban ugu mahadcelinayaa, kaliya waxan ka codsan lahaa in cinwaanka mawduuca uu wax yar qurxiyo waxaa loo arkaa shaqo qiimo beel ah,,
March 11, 2011 at 10:23
Waad mahadsantahay Cabdiraxmaan waan ugu tala galay cinwaanka in uu furo dood ku saabsan wixii shaqo qiimo beel ah iyo waxaan ahayn? marka bal aan ka doodno arimahaas oo fikirkiina ku darsada.
Aniga fikirkeyga shaqo qiimo beel ah ma jirto ilaa in ay ka hor imaaneyso diintaada mooyee. Marka qofku in uu shaqeysto dantiisa ayaa ku jirta, shaqadaan kor ku xusan aniga xitaa waan ka soo shaqeeyay ceebna uma arag.
Marka hore Salaan geddoon mudan , iga gedooma Jimcaale iyo Cabdiraxmaan Beereey oo aan filaa in aw i garan doono , dabcan , arintaan waxaan kala socday joornaalka magaalada borlängetidning run ahaantiina si waan ugu farxay sina uguma farxin .
Si waan ugu farxoo waa Ceyr ka roon si kalena iima cajab gelin oo waa shaqo , qofka gelaa aw yahay shaqooyin kale oo idil waayay , ilama qurxoonaan in Soomaali miiran duurkaa lagu jaro , xaqiiqduna waa taa , haddii aan shaqaysan waynay oo aan magaalada geli waynay dee in Duurka nagula jaro miyaanan xaq loo lahayn ?
Waa iga dood iyo Su’aalba .
Mar haddii aan cilmi ama aqoon lagu shaqaysto aan la lahayn haddana aanan diyaar loo ahayn barashadeed , uun ceyr iyo qujaafaad haddii la doonaa , duurka hala jaro !!
Balse waxaa arintaan aad uga kacay Iswidhishka magaalada qayb ma mida iyagoo dhahay , Natur-keena dhirteena ayaa dad ma shaqaystayaal ah lagu jaraa laguna nabaad guurinaa , iyadoo Kamuun-ka degmada aw shaqo u abuuraa dadka !!! Marka Beereey ustaad Al Faadil tarfa badan in laga eego ma wacanta !!
Runtii markii aan arkay cinwaanka warkaan waxaan u qaata in dadka geedaha jaraya ay u jarayaan si aysan ku qanacsanayn ee lagu qasbay wax mushaar ahna aan lagu siinayn,lakin markaan warka akhriyey waxaa ii soo baxay warbixin xambaarsan wax ka duwan waxa cinwaankeedu tusinayo.Cinwaanka warbixintaan waa negative warbixintuna waa positive sidaa darteed iskuma haboona.
somalida waaa dad jecel in ay shageystaan laakin xogga wey adag tahy men dom försöker ju och det e det som e bra jag hoppas alla får ett jobb
farxiyo abgaaleey says:
March 11, 2011 at 15:55
waan idin salamay aqyaarta dhamantiin waan ku farax sanahay in saas loo soo qab qabto dadka caruurtoda lacagta dhafsadeen oo ka fikiri wayeen caruurtoda oona musli kula sheganayo taasoon banaaneen in galka been lo sheego hadaa tahay qof ILLAAH ka baqaayo. Hadana waxan ku raja weynahay meel walbo oo yurub ka mid ah in saas lagu dhaqmo furinkana wuu yaran lahaa ILLAAH ha no kaso amiin
sxb somalida shaqo kale oo duur kaas aheen looma haayo miyaa
Jimcale bro ad ayad u mahadsantahay, aniga ka Cabdiraxman ahan ceeb uma arko in qofku uu shaqeysto dhididkiisana uu cuno,, Lkn cinwaanka ayaa sidas igula muuqday hadise aad adiga sidaas ugu tala gashay iyana waa meesheeda oo waa llaga dhigi kkaraa in hadal leyskka weydaarsado,,
Mar 2aad ayan dadaalkaaga kaaga mahadcelinyaa..
Bashiir salaama sxb sare,, tacliiqaaga hadda ayaan arkkay waana wax meesha kku jiro oo aragtidaada in badan wey inoo muuqan kartaa weyna inoo dha-dhameysaa aniga waxan u arkkaa soomaalideena in aanba caadeysannay inaan ceyrta iska qaadano shaqane iska ilowno marka waxanba ku fikiray tan aan kusoo suuq galno kuna barano inaan shaqeysan karno kkadib aan meelo ka wanaagsan usii gudubno lkn dad jiif bartay shaqo quman mallagu bilaabo karo ayaan is leeyahay aniga lkn talladaada waan ku qanacsanahay mar walbo bro..
Masha,allah akhi Cabdiraxmaan Beereey mahadsanid , runtii arintaan aadbaan uga naxay markaan magaalada ama joornaalka magaalada ku arkay iyo sida ay Swedhishka u arkeen , waxaa kale oo iiga sii naxdin badnaa hooyadaa Soomaaliyeed ee dhirtaa qabooqga iyo barafka badan jaree . Balse horaybeey maah maah soomaaliyeed u ahayd laxwalba halkeey is dhigtaa lagu qawracaa ,, dabcan waa arin haboon marka laga eego dadka ceyrta uun u af daloola ee aan farna qaadayn . Balse ra,yigaaga ahaa hoos halaga bilaabo waan kugu raacsanahay balse waxaa hubaala ama u malaynaa in siminaarkaan ay dhamaysan doonaan dad aad u yar maxaa yeelay waxaa Xiiso iyo wixii cusub caalamkaa jecel ayaa loo adaa waayahaase ka war dhawraynaa Insha,Allah . Alloow dadkeena fahamsii qiyamka nolasha , iyo in dhididkooda ay cunaan .
Akhi Jaamac mahadsanid iyo Fabdiraxmaan